विदेशी चरणमा गिर्नु बुद्धिमानी होइन
वेदराज पन्त- -
महामण्डलेश्वर श्री पुण्यानन्द गिरि भन्नुहुन्छ– आजको प्रासङगिक विÈय धर्म सापेÔता र निरपेÔताले दिने अर्थको व्याख्या गर्नु हो । यसमा सर्वप्रथम धर्मको अर्थ स्पष्ट हुनु जरुरी छ । धारण्ँ र पोÈण्ँ गर्ने Ôमता जसमा हुन्छ, त्यो गुण्ँ र स्वभावयुक्त हुन्छ धर्म । पानीमा प्राण्ँी मात्रलाई जीवन धारण्ँ गराउने गुण्ँ रहन्छ । पानीले शरीर सफा गरिदिन्छ, भा“डा वर्तन सफा गरिदिन्छ र तिर्खा मेटाइदिन्छ । हामी तिर्खाएर पानी पिउ“दा हामीले पानी त पिउ“छौं– तिर्खा मेट्ने नमेट्ने कुरासंग मतलब राख्दैनौं भन्छौं भने त्यो विचार कसरी युक्तिसंगत हुनसक्छ ? पानीको त्यो धर्मबारे हामी निरपेÔ रहन सक्दैनौं । पानी आङ्खना ठाउ“मा छ, हामी आङ्खनो ठाउ“मा छौं, पानीले आङ्खनो धर्म पूरा गरोस् या नगरोस्, तिर्खा मेटे मेटोस् नमेटे नमेटोस् भन्दैनौं । यसैले हामी पानीको धर्म सापेÔतासंग हामी सहमत रहन्छौं । यसै गरी हामी अन्धानुकरण्ँका प्रभावले आङ्खनो अस्तित्व र मौलिकता समाप्त गरेर प्रगतिशील भनाउन धर्म निरपेÔताका समर्थक बनेका छौं । अंग्रेजहरुले भारतलाई टुक्य्राएर भारत र पाकिस्तान बनाइदिएपछि केही चिन्तकहरुले भारतलाई धर्म निरपेÔ राष्ट्र बनाएको खण्डमा कुनै समय पाकिस्तानलाई भारतमा समाहित गर्न सकिन्छ भन्ने धारण्ाँले यस्तो विचार दिएका थिए । भारतले धर्म निरपेÔ राज्य घोÈण्ाँ गरेर पनि कश्मिरमा दिगो शान्ति कायम गराउन सकेको छैन । के नेपालले धर्म निरपेÔ राज्य रहेर दार्जिलिङग, कुमाउ हु“दै हिमाञ्चल राज्य फेरि नेपालमा समाहित गराउन सक्छ ?
अन्नको धर्म हो कमलोपनपछि सुक्दै जाने र चमेना या भोजन बनेर शरीरधारीहरुको शरीर पुष्ट गराउने । यसरी अन्नले भोक मेटाउ“छ । तपाईले परिपाक गराएको अन्न खाएर शरीरको बलको अपेÔा गर्दिन, उपेÔा गर्छु भन्न सक्नुहुन्छ ? तपाई बुद्धिमान र स्वतन्त्र अस्तित्ववाला व्यक्ति हुनुहुन्छ । अन्न ग्रहण्ँ पनि गर्ने र अन्नको स्वाभाविक धर्मको उपेÔा गर्न पनि लाग्ने यो कसरी सक्नुहुन्छ ? धर्म निरपेÔता जवाहरलाल नेहरुले युरोपियनबाट लिनुभएको थियो । बुझेर लिनुभयो या नबुझी या भारतीय परिवेशमा कसरी लिनुभयो ? त्यो अलग कुरा हो । के नेपालीहरुले नेहरुका शिष्य बनेर हिंड्नैपर्ने ? के नेपाली राजनीतिक दृष्टिले दिवालिया भयौं, कमजोर भयौं ? सोनिया गान्धीलाई हाच्छयू“ आयो भने यहा“का नेपाली नेताले ‘कोल्डारिन’को गोली खाने ? यस्तो पनि कहीं हुन्छ ? यस्ता कुराले तपाई आङ्खनो देशलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्न ।
अग्निको धर्म हो तपाउनु, पकाउनु र जलाउनु । चुल्होमाथि दालभात बसालि दिएर आगोलाई पकाउन या नपकाउन मतलब राख्दैनौं भन्ने कुरा उपयुक्त हु“दैन । अग्निको धर्मको सहयोगले भोजन बन्छ । हामी स्वाभाविक धर्मको अपेÔा गर्दछौं । भूमिभित्र पनि एक प्रकारको अग्नि हुन्छ र अन्नबाली परिपाक गराउन अग्निले आङ्खनो धर्मअनुसार भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । जठराग्निमा प्रज्वलित अग्निले हामीले खाएको भोजन सुपाच्य बनाउ“छ । अग्निले आङ्खनो धर्म निरपेÔता राखोस् भन्ने हाम्रो चाहनाले हामीलाई भोकमरीको सामना गर्नुपर्ला, अर्को बाटो हुनेछैन ।
वायुको धर्म हो प्राण्ँीको प्राण्ँ बनेर सवैको जीवन प्रदान गर्ने । यो धर्मबाट वायु अलग्गिदैन । कमिलादेखि ब्रह्मापर्यन्त वायुको सहारामा सवैले आङ्खनो प्राण्ँ राखेका हुन्छन् । वायुको धर्मलाई हामीहरुले निरपेÔ होस् भन्ने आग्रह गर्न सक्दैनौं । आकाशको धर्म सवैलाई अवकाश या मौका दिने हुन्छ । हामी आकाशको यो धर्मको उपेÔा गर्न सक्दैनौं । आकाशको यो धर्मको उपेÔा गरेर हामीहरुले एक कदम पनि चलाउन बढाउन सक्दैनौं ।
सूर्यलाई हामी भगवान मान्छौं । प्राण्ँी मात्रलाई तपाउनु, न्यानो दिनु या प्रचण्ड किरण्ँले गर्मी दिनु, पृथ्वीबाट या समुद्रबाट जल शोÈण्ँ गर्नु र हजारौं गुण्ाँ बढाएर वर्Èा गराउनु सूर्यको धर्म हो । सूर्यको यो धर्मको अपेÔा गर्छौं भने राज्यलाई धर्म निरपेÔ गराउने सोच किन ल्यायौं ?
चन्द्रमाको धर्म आङ्खना शीतल किरण्ँबाट प्राण्ँीलाई आनन्दित तुल्याउने हो । मुर्खभन्दा मुर्खले पनि आनन्दको उपेÔा गर्न सक्दैन । त्यसै गरी सत्पुरुÈका सेवा धर्ममारत विशाल हृदय एवं सवल हृदयका कारण्ँले अरुको भलाई दिने हुन्छ । दुर्जनको स्वभाव अवाञ्छित हुन्छ तापनि दुर्जनले पनि स्वभावधर्म कायम राखेकै हुन्छ । अवसरवाद उसको धर्म हुन्छ । हिजो श्री ५ लाई घेरेर सरकार जो हुकुम भन्नेहरु आज अरुका सामु हाम्रा तपाईं नै सर्वेसर्वा हुनुहुन्छ भन्दै वरिपरी रहेर उनलाई नै घेरेका छन् । हिजो राजालाई मण्डुकुपमा राखेर आफूहरु पर्खाल बनेका थिए आज उसरी नै नेताहरुलाई झुक्याउ“दै छन् । भारतमा एउटा भनाई छ– ‘गंगा पुग्दा गंगादास, जमुना पुग्दा जमुनादास ।’ दुर्जनको धर्म यस्तै हो ।
भारत धर्म निरपेÔ राज्य भएको दुस्प्रभाव त्यहा“का कतिपय व्यक्तिलाई भएको छ । उनीहरु भन्न सक्छन्– ‘हामी झूट बोल्न सक्छौं, हामी व्यभिचार गर्न स्वतन्त्र छौं किनभने हाम्रो देश धर्म निरपेÔ छ ।’ यस्तो धारण्ाँको ताण्डवनृत्य भारतमा चलेर त्यहा“ हिंसाले ठूलो ठाउ“ ओगटेको छ । तर सत्यको उपेÔा गर्न सकिंदैन । घरको कुनै कुना काप्चामा केही कमी या विकृति देखियो भने घरलाई नै आगो लगाइदिने होइन, मर्मत सम्भार गर्नुपर्छ । सवै धर्मको मूल वेद हो । श्रीकृष्ण्ँले गीतामा वेदलाई ब्रह्म भन्नुभएको छ । वेद अध्येता उसलाई निविर्वाद रुपमा ब्राह्मण्ँ मान्नुपर्छ ।